Izindaba - Isisetshenziswa semishini yokuhlanzwa kwephepha Pulp
Imishini yePulp Pulf yokuhlanzwa kwemishini yokusebenza ngokungafanele
I-vortex slagger yasungulwa ngo-1891, kodwa yaqala ukusetshenziswa embonini yamaphepha ngo-1906.
Ngaleso sikhathi, i-vortex slagger yayisetshenziselwa kuphela ukususa ukungcola okusindayo kusuka ku-fiber slurry.
Umzimba oyinhloko we-slag remover uyisilinda, esingazange sithuthukiswe sibe yisigaxa kwaze kwaba cishe ngawo-1950, futhi sasetshenziswa kakhulu embonini yamaphepha.
Kwaze kwaba ngasekuqaleni kweminyaka yama-1960 lapho i-vortex desander yasetshenziswa kabanzi eChina.
Kusukela ngeminyaka yama-1970, ngenxa yokwanda okusheshayo ekusetshenzisweni kwephepha lemfucumfucu elenziwe kabusha, ifayibha yesibili yezinto zokusetshenziswa slurry, uhlobo nenani lokungcola ku-fiber slurry lenyuke kakhulu.
Ezidingweni zokuhlanjululwa koginindela, ukwakhiwa kwe-slag elimator kuyashesha kakhulu, kube nezinhlobonhlobo zezinhlobo namamodeli we-slag remoator wokuhlanzwa kukadoti, njengokungcola okusindayo ku-slag remoator, ukungcola okulula ku-slag nemikhiqizo yochungechunge lwe-slag ekhipha kabili.
I-slagger esindayo esindayo isetshenziselwa ukususa ukungcola kuginke ngobuningi obuphakeme kune-fiber.Ngamanje, kuningi ukungcola okusindayo okukhipha imikhiqizo yochungechunge eyenziwe ngezinhlobo ezahlukahlukene, ubukhulu, ubude obukhulu bomzimba nezinto zokwakha.
Ukuze kuncishiswe ukulahleka kwe-fiber, i-pulp saver noma isiteshi sokuphinda kusetshenziswe i-fiber esinokumiswa okukhethekile kungezwe. Ukuze konge amandla, kwenziwa i-slagger yokungcola okuphezulu naphakathi nendawo.
Ukungcola okukhanyayo slagger ukukhanya ukungcola slagger ukukhanya ukungcola slagger uhlobo lwe-slagger olwenzelwe ngokukhethekile ukususa ukungcola okuncane kunesilinganiso se-fiber ku-pulp. Kunokubaluleka okukhulu ukuhlanza uginindela wephepha.
Ngoba ubukhulu obuthile bokungcola okusindayo nokungcola okuncane kuhlukile kunokwe-fiber, ukuqondiswa kokugeleza kokugeleza okuhle kwe-slurry nokugeleza kwe-slag ngemuva kokuhlukaniswa nakho kwehlukile kusisusi se-slag.
Ngakho-ke, ukwakheka kwe-slag kuondoa ukususa lokhu kuhlukile. Ngisho nokwakheka kokungcola okukhanya kuyinkimbinkimbi ngokwengeziwe, futhi nemingcele yokusebenza kwezobuchwepheshe nayo ihlukile.
Ukuhlanzwa kwempuphu nemishini yokugoqa esetshenziswa embonini yamaphepha.
Umumo uyisigaxa esine-engeli eyindilinga engaba ngu-8 ~ 13 degrees. Yenziwe ngensimbi engagqwali, iraba eliqinile noma insimbi ehlanganisiwe enolwelwesi lweplastiki lwe-polyethylene.
Udonga lwangaphakathi lubushelelezi futhi luhlanzekile, lumelana nezingubo, alumelana nengcindezi, aluvumeli ukugqwala, futhi alikhubazi ngaphansi kokushisa kwama-40 ~ 60 ℃.
Ukunyakaza kwe-slag kusetshenzisiwe ukususa ukungcola okusindayo.Ukusebenza kahle kokususwa kwe-slag kuphakeme kune-eddy yamanje ye-slag remover, enganciphisa kakhulu izinga lothuli lomfutho.
Futhi kungaba yizinqwaba noma imigqa ehambisanayo, ukusika kungakhethwa ezigabeni, ukunciphisa ukulahleka kwe-pulp slag.